Myanmar Defence Weapons: အထူးစစ်ဆင်ရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များ
လေကြောင်းချီစစ်ဆင်ရေး ရန်သူ့နယ်မြေအတွင်း ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရေး စစ်ရေးလေ့ကျင့်စဉ် က မြန်မာ့တပ်မတော် အထူးချေမှုန်းရေတပ်ဖွဲ့ဝင်များ
အပေါ်ကစစ်သည်ရဲ့ နောက်ကျောမှာဆွဲထားတဲ့ အိတ်က ဆက်သွယ်ရေးစစ်လားဗျ..
စစ်သည်များသယ်ဆောင်ရာတွင် အသုံးပြုသော ဘဲယ်စစ်သုံးရဟတ်ယာဉ်၏ ရှေ့ခန်း
sanaythar May 7, 2012 at 9:49 PM
ကျွန်တော်တို့နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်ကို mm၊ ဒါပေမယ့် မတင်တာကြာရင်တော့ တောင်းမှာပဲ၊ စိတ်မညစ်ပါနဲ့။
ပုံတွေကဟောင်းပေမဲ့ တန်းဖိုးရှိပါတယ်။ အရင်ကရုပ်မြင်သံကြားညနေပိုင်းအစီအစဉ်အစ စစ်ချီသီချင်းများလွှင့်ရာမှာ ဒီတပ်ဖွဲ့မျိုးကိုမြင်ဖူးတယ်။ တပ်မတော်ထုတ်အူဇီကိုင်တယ်။ ပေါင်မှာပစ္စတိုတစ်လက်၊ တစ်ခြားပေါင်တစ်ဖက်မှာ ကျည်ကပ်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်းကလေထီးတပ်တွေသုံးတဲ့ခေါင်းဆောင်းမျိုးဆောင်းတယ်။ ကျည်ကာမပါဘူးလို့တော့မှတ်မိတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်ကနေကြိုးတွေနဲ့ဆင်းတာလည်းပြတယ်။ ရဟတ်ယာဉ်ဘေးမှာထိုင်တာလည်း blackhauk down မှာseals တွေထိုင်ကြသလိုပဲ၊ အလွန်ကြည့်ကောင်းပါတယ်။ ညီအစ်ကိုတော်တော်များများလည်းကြည့်ဘူးသူရှိကြမှာပါ။ လေထီးတပ်သားတွေရဲ့ စစ်ဝတ်စုံနဲ့လည်းအတူတူပဲလို့ထင်ပါတယ်။ မှတ်မိသူများပြောကြပါဦးခင်ဗျာ
ဆင်ဖြူရှင် May 16, 2012 at 11:56 AM
Budget တော်တော်များများသုံးပြီး ပြန်ရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းသင့်တယ်လို့ထင်တယ်ဗျာ
အမေရိကန်တပ်မတော် မှာဆို ကြည်းရေလေ အတွက် အထူးတပ်ဖွဲ့တွေရှိပါတယ်
ကြည်းတပ်မှာဆို Delta Forces
ရေတပ်မှာဆို Navy Seals
လေတပ်အတွက် Air Commando
ဒါ့အပြင် အခြား အထူးတပ်တွေဖြစ်တဲ့ Special Forces, Marine စသဖြင့် တပ်တွေအများကြီးဖွဲ့စည်းထားတာတွေ့ရပါတယ်
အမေရိကန်တပ်မတော်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်သုံးစရိတ်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်
ဒါ့ကြောင့်သူတို့တပ်တွေလို မြန်မာ့တပ်မတော်က အများကြီးမဖွဲ့နိုင်ပါဘူး
သို့သော်အနဲဆုံးတော့ ခေတ်မှီပြီးစနစ်တကျလေ့ကျင့်ထားတဲ့ အထူးတပ်ဖွဲ့တခုရှိသင့်တယ်ထင်ပါတယ် ဒါမှရန်သူ့နယ်မြေကိုလျှပ်တပြက်ဝင်ရောက်စစ်ဆင်နိုင်မှာပါ
ဒီတပ်တွေအတွက်အခြားခေတ်မှီလက်နက်တွေ၊ ထောက်လှမ်းရေးကိရိယာတွေ၊ ဆက်သွယ်ရေးစက်တွေ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွေလိုအပ်တာတော့အထူးပြောစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်
မြန်မာပြည်မှာ အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်မှုလေ့ကျင့်ရေးတပ်တွေ ရှိသော်လည်း အာဆီယံ စံညွန်းတောင်မမှီသေးပါဘူး
စစ်ပွဲတွေမှာသုံးတယ်လို့မကြားရပါဘူး သမရိုးကျတပ်တွေနဲ့သာ အကျအရှုံးများစွာ တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်
ရည်ရွယ်ချက်သာမှန်ကန်ပါက ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်း လမ်းပွင့်သွားနိုင်ပါတယ်
ကျွန်တော်ကတော့စစ်သုံးစရိတ်ကိုလူအင်အားလေးသိန်းအတွက် မလောက်မငသုံးနေမဲ့အစား အထူးတပ်တွေဖွဲ့ပြီး အင်အားနှစ်သိန်းကို စရိတ်နှဆသုံးစေချင်တယ်ဗျာ
ဒီလိုသာလျှော့ချနိုင်ရင်နိုင်ငံအတွက်အခြား အကျိုးရှိမဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ဆောင်နိုင်မဲ့လူအင်အား နှစ်သိန်းလောက်ပိုထွက်လာမှာပါ
အခြားPoint of View ကနေဆွေးနွေးပေးကြပါဦး
whispering shadow October 12, 2012 at 5:04 AM
မှနျ​ပါ​တယျ​ခငျဗြာ။ ဒီ​လို​စဈဆငျ​ရေး​တပျဖှဲ့​တှေ​ဟာ​မညျ​သညျ့​စဈ​တပျ​တှငျ​မ​ဆိုလို​အပျ​တဲ့ element တ​ခု​ဖွဈ​ပါ​တယျ။ ဒီ​လို​တပျဖှဲ့​တှေ​ကွောငျ့​ရ​ရှိ​ခဲ့​တဲ့​အောငျမွငျ​မှု​တှေ​ကို​ကမ်ဘာ​နိုငျငံ​အနှံ့အပွား​မှာ​အလှယျ​တ​ကူ​တှေ့​ရ​နိုငျ​ပါ​တယျ။ ဒါ​ပေ​မယျ့​မွနျမာ​နိုငျငံ​မှာ​တော့​ကြှနျတျော​တို့ ရဲဘျော​တှေ​ရဲ့​အသကျ​ဟာ​စကျ​သေ​နတျ​တ​လကျ​လောကျ​တောငျ​တနျဖိုး​ထား​ခွငျး​မ​ခံ​ရ​တာ​ကို​စိတျ​မ​ကောငျး​စှာ​နဲ့​တှေ့​ရှိ​ရ​ပါ​တယျ။ ဒါ​ကွောငျ့​ရဲဘျော​တှေ​အကြ​အဆုံး​ဘယျလောကျ​မြား⁠မြား​အထကျက​သိတျ​ဂရု​မ​စိုကျ​ကွ​ပါ​ဘူး။ ကြှနျတျော​တို့​ရဲ့​အခြိနျ​မှာ​အထူး​စဈ​တပျ​တှေ​ကို​စနဈ​တ​ကြ​အသုံးပွု​တာ​ကို​မွငျ​သှား​ရ​ဖို့​အထူး​ကိုမြှျော​လငျ့​ပါ​တယျ​ခငျဗြာ။
maungzaw2034 May 18, 2012 at 8:34 AM
အထူးတပ်ဖွဲ့အတွက် Glock G 17 (9×19 mm)(http://www.glock.com/english/pistols_models.htm) ပစ္စတိုကို ပုံစံတူထုတ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးထုတ်နဲ့ အင်္ကျီက ကျည်ကာပါ။ အမှန်တကယ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ပိတ်လွှာတွေထပ်ပြီး ချုပ်တဲ့စနစ်သုံးထားတာပါ။ ပြည်တွင်းမှာပဲ ထုတ်တာပါ။ ပုံစံကတော့ အစ္စရေးပုံစံပါ။ ဒါပေမယ့် နည်းပညာကတော့ တရုတ်နဲ့ ရုရှားတစ်ခုခုဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်။
sanaythar May 18, 2012 at 11:25 PM
ရန်သူ့စခန်းကုန်းတစ်ခုကို တပ်မတော်တပ်ရင်း(၃)ရင်းပါဝင်တဲ့စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဆင်နွဲပြီး အပြီးတိုင်ချေမှုန်းစစ်ဆင်ပါမယ်။ တပ်ရင်းတွေရည်မှန်းချက်ကို ချီတက်ပါမယ်။ တပ်ရင်းနှစ်ရင်း-တစ်ရင်းကို စစ်ကြောင်း(၁)(၂)နှစ်ကြောင်းခွဲပြီးသွားပါမယ်။ တစ်ရင်းကနယ်မြေစိုးမိုးမှု၊ အရံ၊ ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်း လုံခြုံရေးယူပါမယ်။ ကားလမ်း၊ ရထားလမ်း၊ တံတားနားကကို မခွာနိုင်တော့ပါ။ အမြှောက်တပ်က ကြိုတင်အကဲကြည့်မယ်။ ပစ်မှတ်မှတ်ပုံတင်မယ်၊ ကြိုတင်ပစ်ခတ်မယ်။ တစ်ရင်းကရှေ့သတ်ကွင်းကနေ ရောင်ပြတိုက်မယ်၊ တစ်ရင်းကအနောက်ကရန်သူမထင်တဲ့လမ်းရှည်ကနေပတ်တိုက်မယ်။ တစ်ရင်းနှစ်ကြောင်း၊ စစ်ကြောင်း(၁)မှာ ရင်းမှူးဦးစီး စစ်ကြောင်းရုံးနဲ့ နှစ်ခွဲ၊ စစ်ကြောင်း(၂)မှာ ဒုရင်းမှူးဦးစီးနှစ်ခွဲပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ တက်တိုက်ရမယ့်နေရာကို စစ်ကြောင်းမှူးတွေကသတ်မှတ်ပြီ။ စစ်ကြောင်းမှူးနဲ့ ရုံးအဖွဲ့တစ်ခွဲချန်ခဲ့၊ နှစ်ခွဲ သို့မဟုတ် တစ်ခွဲ ဦးတည်စခန်းရဲ့ စစ်မျက်နှာတစ်ဖက်စီမှာပေါ့၊ ချေမှုန်းရေးတာဝန်ယူထားတဲ့တပ်ခွဲမှာလည်း ခွဲမှူးနဲ့တစ်စိတ်နောက်ရံ ကျန်နှစ်စုက အရာရှိတွေဦးစီးပြီးတက်တိုက်တော့---တိုက်ပွဲဖြစ်၊ လန်ကျ၊ ပြန်စုဖွဲ့၊ လက်နက်ကြီးနဲ့ပိုက်စိတ်တိုက်ပစ်(ဒါတောင်ကျည်သုံးနိုင်တဲ့ အဓိကတိုက်ပွဲစဉ်ကြီးများမှပါ)၊ ချေလျင်အကူလက်နက်ကြီးလောက်နဲ့ စခန်းသိမ်းရတာတွေအများကြီး။ ပြန်စုဖွဲ့၊ တက်တိုက်၊ အရာရှိငယ်တွေက သူတို့ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီး ရဲဘော်တွေကိုတွန်းတင်၊ ထွေးလုံးရစ်ပတ်တိုက်ပွဲဖြစ်၊ စခန်းသိမ်းမိပြီ၊ အောင်ပြီ၊ အောင်မြင်သွားပြီ။ ပြန်သုံးသပ်ကြပါဦး။
တပ်ရင်းသုံးရင်း၊ လေကြောင်းအကဲကြည့်မပါ၊ airborne command မပါ။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးမကောင်း၊ communication က ခဏခဏကြားဖြတ်ခံရ၊ radio silence လုပ်ပြီးတက်တိုက်ရတယ်။ medical assist အားနည်း၊ ကုသမှုအားနည်းလို့ မကျသင့်ဘဲကျရတယ်။ သုံးရင်းမှာ တစ်ကယ်တမ်း contact with enemy ကတပ်စိတ် လေးစိတ်၊ တပ်ဖြန့်ဖို့ မြေပြင်အနေအထားမကောင်းရင် တစ်စိတ်ချင်းဘဲ ထိတွေ့မှုဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ခေတ်မှီစစ်ပွဲအတွက် ကျွန်တော်တို့ ပြင်ဆင်လေ့ကျင့်သင့်ပါပြီ၊ ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ကြီးတိုးတက်လာတာမြင်ချင်လှပါပြီ။ ပြည်သူများကလည်း လေ့ကျင့်မှုတွေ၊ တည်ဆောက်မှုတွေကို နိုင်ငံကြီးသားများပီပီ နားလည်အားပေးကြဖို့သင့်ပါပြီ။ နိုင်ငံရဲ့တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်အဖြစ် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများကပါ လေးစားရသော တပ်မတော်ဖြစ်လာပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုပါတယ်ခင်ဗျား။
sanaythar May 19, 2012 at 1:46 AM
ko maungzaw2034 ရေးတာဖတ်ရတာ၊ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာအကိုရာ၊ ၀မ်းသာအားတက်စရာပါပဲခင်ဗျ၊ ကို mm ရေ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ တွေ့နေရတာအမှန်ပါပဲ၊ JH-7 တွေရောက်မယ်၊ MBT-2000 သေချာပြီင်္၊ Mi-35E Hind ၊ပြီးတော့ကိုယ်တိုင် ဒုံးလက်နက်တွေထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်၊ Frigate, Corvette တင်မကပဲ အခု Stealth Stage ကိုပါတက်လှမ်းလိုက်ပြန်ပါပြီ၊ အခုကို မောင်ဇော်2034 ရေးတဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့များအတွက် လက်နက်၊ ချပ်ဝတ်များအကြောင်း တွေကိုကြည့်ရင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲတိုးတက်လိုတဲ့ ခေါင်းဆောင်များအောက်မှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ ပုံမှန်တိုးတက်လျှက်ရှိကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒီသတင်းလေးသေချာချင်ပါတယ်၊ စိတ်ချလက်ချ ၀မ်းသာချင်လို့ပါ။ ကျွန်တော်နဲ့စိတ်တူအစ်ကိုများလည်း ၀မ်းသာချင်မှာပါ။ အားနည်းချက်အနည်းငယ်ရှိစမြဲပေမယ့် တိုးတက်နေတာအမှန်ပါ။
whispering shadow October 12, 2012 at 5:16 AM
ပွဿနာ​က ဒီ​လကျနကျ​တှေ​မ​တပျ​ဆငျ​နိုငျ​တာ​မဟုတျ​ဘူး​လို့​ထငျ​ပါ​တယျ။ မွနျမာ​နိုငျငံ​က​နရော​တကာ​မှာ maintenance အလှနျ​အားနညျး​ခွငျး​ကို​ကြှနျတျော​သတိပွု​မိ​ပါ​တယျ။ အထကျက"လုပျ​ကွ​ဟေ့" ဆို​ဟေး⁠ဟေး​နဲ့​လုပျ​လိုကျ​ကွ​ပွီး​နောကျ​တော့​ဒီ​အတိုငျး​ပဈထား​ခဲ့​တတျ​တာ​ခဏခဏ​ပါ​ပဲ။ နပွေညျတျော zoo ကို​ပဲ​ကွညျ့​ပါ။ အဲ​တော့​ကြှနျတော့​အမွငျ​အတိုငျး​ဆို​ရငျ​တပျ​မတျော​ဟာ funding ဘယျလောကျ​ပဲ​သုံး⁠သုံး​ဒီ​လို​အခွေ​ခံ​ကြ​လှ​တဲ့ maintenance အပိုငျး​ကို​သခြော​မ​ပွုပွငျ​ဘူး​ဆို​ရငျနာ​မညျကြျော​ကွား​လှ​တဲ့ Hind တိုကျခိုကျ​ရေး​ရဟတျ​ယာဉျ​မက​လို့​နောကျ​ဆုံးပျေါ PAK FA Stealth Fighter ကို​ဝယျ​ယူ​နိုငျ​တယျ​ဆို​လဲ​ကြှနျတျော​တို့​တပျ​မတျော​ရဲ့​အားနညျး​ခကျြ​ဟာ​အမွဲ​ကွီးမား​နေ​မှာ​သခြော​သ​လောကျ​ရှိ​ပါ​တယျ​ခငျဗြာ။
Tun Tun Ko August 3, 2012 at 5:37 AM
Comments တွေမှာ အစ်ကိုတွေ၊ညီတွေ ဆွေးနွေးထားလိုက်ကြတာ အားရစရာပါဘဲ။ စစ်ဘက်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေမှန်း သိသာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်စစ်တပ်မှာမဆို Will to fight က အရေးကြီးဆုံးဘဲ၊ လက်ရှိတို့တပ်မတော် မှာ အဲဒါကြီးရှိသေးကြရဲ့လား။
whispering shadow October 12, 2012 at 5:28 AM
စိတျ​မ​ကောငျး​စှာ​နဲ့​ပွော​ပါ​ရ​စေ။ Will to Fight ဆို​တာ​ကြှနျတျော​တို့​တပျ​မတျော​ထဲ​မှာ​မ​ရှိ​တော့​တာ​ကွာ​ခဲ့​ပါ​ပွီ။ ရဲဘျော​တှေ​ဟာ​မိမိ​တို့​ဘာ​ကွောငျ့​တိုကျ​ပှဲဝငျ​နေ​ရ​တာ​လဲ​ကို​သခြော​ဂ​ဃ​န​ဏ​သိ​ခွငျး​ထကျ အရာရှိ​က "ဒီ​ဟာ​ရနျသူ" လို့​ဆို​လိုကျ​ရငျ​သတျ​ပဈ​ရ​မယျ​ဆို​တာ​လို Brainwash အလုပျ​ခံထား​ရ​တာ​ပဲ​မြား​ပါ​တယျ။ အဲ​တော့​ကြ​ဆုံး​သှား​ကြ​တဲ့​ရဲဘျော​တှေ​ရဲ့​အသကျ​ဟာ​အလ​ဟ​သ​ဖွဈ​သှား​ကွ​တာ​ကို​ရငျနာ​စှာ​နဲ့​တှေ့​ရှိ​ရ​ပါ​တယျ။ ဒါ​ကို​ပွငျ​ခငျြ​ရငျ​တော့​ပထမ​ဉီး​စှာ​ရဲဘျော​တှေ​ကို objective and subjective thinking ကို​ခငျြ့​ခြိနျ​သုံးသပျ​နိုငျ​ရနျ​ပညာသငျ​ကွား​ပေး​ရ​ပါ​မယျ။ ဒါ​ကြှနျတော့​စိတျ​ထငျ​ကို​ပွော​တာ​ပါ​ခငျဗြာ။ မှား​ရငျပွငျ​ပေး​ကွ​ပါ။ မွနျမာ​လို​ဘာသာ​မ​ပွနျ​တတျ​တဲ့​စကားလုံး​တှေ​အတှကျ English လို​ပဲ​ရေးထား​တာ​ကို​ခှငျ့​လှတျ​ပေး​ကွ​ပါ​ခငျဗြာ။
Snow Rain-Lover October 13, 2012 at 11:52 AM
ကျွန်တော်ထက်ပြီ ရေးပေးထာတာပါ ပိုနာလည်အောင်လိုပါ :P “စိတ်မကောင်းစွားနဲပြောပါ၇စေ။ Will to Fight်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်ထဲမှာမ၇ှိတော့တာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ ၇ဲဘော်တွေ ဟာမိမိတို့ ဘာောကာင့်တိုက်ပွဲ-၀င်နေရတာလဲကို သေချာ ဂဃ နဏ သိချင်ထက် အရာရှိက “ ဒီဟာရန်သူ လိုဆိုလိုက်ရင် သတ်ပစ်ရမယ်ဆိုတာလို Brainwash အလုပ်ခံတားရတာပဲများပါတယ်။ အဲတော့ ကျဆုံးသွားကျတဲ့ ရဲဘော်တွေ ရဲ့အသက်ဟာ အလဟသ ဖြစ်သွားကြတာကို ရင်နာစွာနဲ တွေရှိရပါတယ်။ ဒါကိုပြင်ချင်ရင်တော ပထမဦးစွား၇ဲဘော်တွေကို Objective and subjective thinking ကိုချင်ချိန်သုံးသပ်နိုင်ရန် ပညသင်ကြားပေးရပါမယ်။ ဒါ ကျွန်တော်စိတ်ထင်ကိုပြောတာပါ ခင်ဗျာ.။ မှားရင်ပြင်ပေးကြပါ။ မြန်မာလိုဘာာမပြန်တက်တဲ့ စကားလုံးတွေအတွက် English လိုပဲ ရေးထာတာကို ခွင့်လွတ်ပေးကြပါ ခင်ဗျာ“
whispering shadow October 14, 2012 at 2:23 AM
whispering shadow October 12, 2012 at 5:45 AM
ကြှနျတျော​နား​မ​လညျ​တဲ့​အခကျြ​လေး​တ​ခကျြ​ကို​တငျပွ​ပါ​ရ​စေ။ UZI ဟာ Sub-machine gun class ဖွဈ​ပွီး 9mm ကညျြ​ကို​အသုံးပွု​ပါ​တယျ။ မွနျ​မာ့​စဈမွပွေငျ​တှေ​ရဲ့​ထုံးစံ​အတိုငျး​တိုကျ​ပှဲ​အမြား​စု​ဟာ​တော​တောငျ​တှေ​ထဲ​မှာ​တိုကျ​ရ​တာ​မြား​ပါ​တယျ။ UZI ရဲ့ Effective Range ဟာ 200 မီ​တာ​ပဲ​ရှိ​ပွီး 9mm ပဲ​ရှိ​တဲ့​အတှကျ Stopping power ဟာ​လညျး​မွနျ​မာ့​ရေ​မွေ​အရ အလှနျ​ကို​နညျး​လှနျး​ပါ​တယျ။ အနညျး​ဆုံး​တော့ AK74u လောကျ​တော့​သုံး​သငျ့​တယျ​ထငျ​ပါ​တယျ။ သူ့​ရဲ့​ဖ​ခငျ AK47 လို​ပဲ​အလှနျ​ကို​အကွမျး​ခံ​တဲ့​အတှကျ​မိုး​နဲ့​စိုစှတျ​မှု​မြား​တဲ့​ရိုးမ​တောကွီး​တှေ​နဲ့​ကိုကျ​လိမျ့​မယျ​လို့​ယုံကွညျ​ပါ​တယျ။ 1960-70 တုနျး​က ကရငျပွညျနယျ​မှာ​အမေ​ရိ​ကနျ​တပျ​တှေ​နဲ့​လှုပျရှား​ခဲ့​တဲ့ Australia က​အငွိမျးစား​ကှနျ​မငျ​ဒို​တ​ဉီး​နဲ့​ကြှနျတျော​စကားပွော​ခဲ့​တဲ့​အခါ​မှာ​သူ​က​ဆို​ပါ​တယျ။ သူ​ကိုငျ​ခဲ့​ရ​တဲ့ M4 Carbine ရိုငျ​ဖယျ​ထကျ​စာ​ရငျ AK47 ကို​ပို​သုံး​ခငျြ​ပါ​တယျ​တဲ့။ ဘာ​ကွောငျ့​လဲဆို​တော့​နုနယျ​လှ​တဲ့​အမေ​ရိ​ကနျ​လုပျ M Series ရိုငျ​ဖယျ​တှေ​ဟာ​မွနျ​မာ့​ရာသီ​ဉ​တု​ရဲ့​ဒုက်ခ​ပေး​မှု​ကို​အကွီး​အကယျြ​ခံ​ရ​လို့​ပါ​တဲ့။ AK47 ဟာ​ဘယျ​အခြိနျ​ပဲ​ပဈ⁠ပဈ​ဘယျလောကျ​ပဲ neglect လုပျ​ထား​ပါ​စေ​ကညျြ​အမွဲ​ထှကျ​ပါ​တယျ​တဲ့။
Snow Rain-Lover October 13, 2012 at 11:43 AM
ကျွန်တော်ထက်ပြီ ရေးပေးထာတာပါ ပိုနာလည်အောင်လိုပါ :P “ကျွန်တော်နာမလည်တဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ကိုတင်ပြပါရစေ။ UZI ဟာ Sub-machine gun class ဖြစ်ပြီး9mm ကျည်ကိုအသုံးပြူပါတယ်။ မြန်မာ့စစ်မြေပြင်တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတိုက်ပွဲအများစုဟာ တောင်တွေထဲမှာတိုက်ရတာများပါတယ်။ UZI ရဲ့ Effective range ဟာ 200 မီးတာပဲရှိပြီး 9mm ပဲရှိတဲ့ အတွက် Stopping power ဟာလဲ မြန်မာရေမြေအရ အလွန်ကို နည်းလွန်းပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ AK74u လော်ကတော့သုံးသင်တယ်ထင်ပါတယ်။ သူရဲ့ ဖခင် AK 47 လိုပဲ အလွန်ကိုအကြမ်းခံတဲ့ အတွက် မိုးနဲစိုစွတ်မူများတယ်ရိုးမ တောကြီးတွေနဲကိုက်ကလိမ့်မယ်လို ယုံကြည်ပါတယ်။ 1960-70 တုန်းက ကရင်ပြည်နယ်မှ အမေရိကန်တပ်တွေနဲ လှုပ်ရှားခဲတဲ့ Australia က အငြိမ်စားကွန်မန်ဒို တဦးနဲ့ ကျွန်တော်စကားပြောခဲတယ်အခါမှာ သူကဆိုပါတယ်။ သူကိုင်ခဲတယ် M4 Carbine ရိုင်ဖယ်ထက်စာရင် AK 47 ကိုပိုသုံးချင်ပါတယ်တဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတောနုနယ်လှတဲ့ အမေရိကန်လုပ် M Series ၇ိုင်ဖယ်တွေဟာ မြန်မာရသီဥတုရဲ ဒုက္ခပေးမူကို အကြီးအကျယ်ခံရလိုပါတဲ့။ AK 47 ဟာ ဘယ်အချိန်ပဲပစ်ပစ် ဘယ်လောက်ပဲ neglect လုပ်ထားပါ စေကျဉ်အမြဲထွက်ပါတယ်။ “
sanaythar October 12, 2012 at 8:23 PM
ကို mm , ဒီပို့စ်မှာ whispering shadow ဆွေးနွေးထားတာတွေကို ကျွန်တော်မမြင်ရဘူးဗျ။ Font တွေပျောက်နေတယ်။ ဘာFont သုံးသလဲဗျာ။ ကူညီပါဦး။
whispering shadow October 12, 2012 at 8:49 PM
Hi, I'm using default Myanmar fonts that come with Macbook. If you cannot see, I can type everything again in English. It's even better because it is sooooo hard for me to type in Burmese and takes mealong time. Have to use English to Myanmar dictionary too.
whispering shadow October 12, 2012 at 9:00 PM
What I said in the last post was "Please allow me to presentapoint that I don't fully understand. UZI is Sub-machine gun class and uses 9mm rounds. As in typical Myanmar terrain, most of the skirmishes occur in jungles. Because UZI's effective range is merely 200m, stopping power is very little in Myanmar terrain. At least the AK74u should be used. Like its father the AK47, it is very durable so it will be suitable for the Yoma jungles which have high levels of rain and moisture. When I spoke to an retired Australian Commando who operated in Karen state with the Americans during 1960-70 told me. 'I prefer the AK47 than the M4 Carbine rifle. Because fragile M Series rifles suffer from Myanmar weather. No matter when you shoot, no matter how much it has been neglected, the AK47 WILL always fire.' "
Snow Rain-Lover October 13, 2012 at 11:31 AM
ကို sanaytharေ၇း whispering shadow ရေးတာ Myanmar3font ပါ အဲဒီဖောင့်လေးကိုတော computer မှာ install လုပ်ထားသင်ပါတယ် font လေတစ်ခုတည်ပါ ဘာမှမခက်ပါဘူး လိုအပ်ရင် zawgyi မသုံပဲ အဲဒီဖောင့်လေပြောင်းနှိပ်လိုက်ရင် စာတွေဖတ်လိုရပါတယ် microsoft window office မှာလဲ
သုံးလိုရပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ :P